चिनियाँ राष्ट्रपति बस्ने सोल्टी होटेलकाे भाडा कति ? – Life Nepali
काठमाडाैं २५ असाेज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा पुरै रिजर्भ गरिएको छ। २ सय ८२ वटा कोठा भएको साेल्टी होटल सीको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले तीन दिनका लागि बुक गरेको छ । सु’रक्षाका का’रण होटेलमा अन्य सर्वसाधारणलाई बस्न नदिने गरी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मका लागि सबै कोठा बुक गरिएको हो । बुक गरिएका २ सय ८२ वटा काेठामा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आउने प्रतिनिधिमण्डल मात्र बस्नेछन्। उनीहरूको सु’रक्षालाई ध्या’नमा राख्दै होटलमा रहेका उपहार पसलहरू पनि बन्द हुने भएको छ।
सोल्टी होटेलमा एउटा कोठाको एक दिनको करिब १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जसअनुसार सबै काेठाकाे तीन दिनको भाडा एक करोड २७ लाख रुपैयाँ होटेललाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई रात्रिभोजसमेत सोल्टी होटेलमै दिनेछिन् । होटलले उच्च पदस्थका लागि पहिल्यै बुक भएकाले केही समय अघिदेखि नै निर्धारित मितिका लागि बुकिङ लिन छाडेको थियो।
नेपालको राजकीय भ्र’मणमा आज आउन लाग्नुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वागतका लागि आम नेपाली ब्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा आज र भोलि हुन लागेको सीको राजकीय भ्रमण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र आपसी स’म्बन्ध अ’भिवृ’द्धिका हि’साबले ऐतिहासिक हुने अपेक्षासहित नेपाली जनता स्वा’गतका लागि अतुर देखिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको स्वागतको भव्य तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुक विकासको मार्गलाई तीव्रता दिँदै अगाडि बढिरहेका बेला हुन लागेको भ्रमण ऐतिहासिक हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आम नोपलीको आशाअनुसार नै भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच महत्वपूर्ण परियोजनामा सम्झौता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायी कृष्ण ढुङ्गानाले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई ‘हट्ली वेलकम टु नेपाल’ भन्दै सगरमाथाको देश, बुद्ध भूमिको देश र असल छिमेकीको नाता जोड्दै दुवै देशका राष्ट्रपतिको तस्वीर राखेर सामाजिक सञ्जालबाटै भ्रमणको स्वागत गर्नुभएको छ । अहिले भारतमा रहनुभएका राष्ट्रपति सी विशेष विमानबाट आजै त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले आजै नेपाली समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ भने उहाँको सम्मानमा होटल सोल्टीमा राजकीय भोजको आयोजना गरिएको छ । आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ ।
उहाँहरुको समुपस्थितिमा विभिन्न विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ । राजकीय भ्रमणका क्रममा उहाँले विभिन्न राजनीतिक नेतासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई बलियो आर्थिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले रासससँग कुरा गर्दै दुई देशको सम्बन्ध युगौँ पुरानो रहेको र चीनका सामु सम्भावनैसम्भावना भएकाले चीनले जुन आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ, त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
Previous पुनर्निर्माणका लागि साउदी अरबद्वारा ३ अर्ब ४० करोड सहुलियत नेपाललाई ऋण प्रदान !
Next सी स्वागतको लागि सजावटमा मात्रै २० करोड खर्च